माघ लागेपछि विद्यालयहरु खुल्ने कुरालाई कसरी लिनु भएको छ ? (प्रश्न एक उत्तर अनेक) - Roshani Kc
माघ लागेपछि विद्यालयहरु खुल्ने कुरालाई कसरी लिनु भएको छ ? (प्रश्न एक उत्तर अनेक)
Home/News/माघ लागेपछि विद्यालयहरु खुल्ने कुरालाई कसरी लिनु भएको छ ? (प्रश्न एक उत्तर अनेक)
काठमाडौं– कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कम भैसकेको छैन ।
आज पनि देशभरीमा ५ सय ५४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
परीक्षण कम भएकाले संक्रमितको संख्या पनि कम भएको समेत भनिएको छ ।
यद्यपि, शहर–बजारदेखि गाउँसम्मको दृष्य नियाल्ने हो भने कोरोना भाइरसको जोखिम निकै कम भएको जस्तो देखिएको छ ।
त्यसैले काठमाडौं उपत्यका बाहिर मानिसहरुको अनुहारमा मास्क समेत कम देखिन थालेको छ भने अधिकांश स्थानका विद्यालयहरु पनि खुलिसकेका छन् ।
अब राजधानी काठमाडौंमा समेत यही माघ १ गतेदेखि विद्यालयहरु खुल्ने घोषणा गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरु स्वास्थ्यसुरक्षा मापदण्ड पालना गरी यही माघ १ गतेदेखि क्रमश: खुल्ने भनिएको छ ।
यही मेसोमा कलाकर्मी डटकमले आफ्नो नियमित स्तम्भ प्रश्न एक उत्तर अनेकमा यो साता ‘माघ लागेपछि विद्यालयहरु खुल्ने कुरालाई कसरी लिनु भएको छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेको छ ।
हामीलाई प्राप्त विभिन्न व्यक्तित्वहरुका धारणाहरु जस्ताको तस्तै :
अहिलेलाई पर्ख र हेरको स्थिति हुनुपर्छ । बेला अझै भएको छैन जस्तो लाग्छ है ।
सञ्चिता लुईँटेल, अभिनेत्री
माघ महिनादेखि स्कूल खोल्नु कुरा ठिक पनि हो किनभने अब हामीले कोभिडसंग कसरी लड्ने, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा हामीले पनि सिकिसकेका छौं । स्कूलका शिक्षक, प्रधानाध्याकसहित विद्यार्थीहरुले पनि यो कुरा जानिसकेको अवस्था छ । सम्पूर्ण कामहरुले निरन्तरता पाउन थालिसकेका छन् । हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमै पनि सिनेमा हलहरु खुल्न थालिसकेका छन् । मलहरुमा पनि मानिसहरु आवात–जावत गर्न थालिसकेका छन् । सडक पेटीहरुमा मानिसहरु हिंड्न थालिसकेका छन् । सुरक्षित कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन् । त्यसमा पनि शिक्षा जस्तो कुरालाई धेरै समयसम्म पछाडि पारिरहनु हुन्छ जस्तो लाग्दैन । बच्चाहरुले आफ्नो नियमितता बिर्सेका छैनन् । स्कूलले पनि अनलाइन कक्षामार्फत विद्यार्थीलाई जोडिरह्यो, साथीभाइहरुसंग सम्पर्कमा राखिरह्यो, उनीहरुलाई पनि अब सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुरा बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब स्कूल खोल्ने निर्णयमा म पूर्ण रुपमा सहमत छु ।
निर्णय श्रेष्ठ, गायक
हुन त बालबालिकाहरुले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु । यद्यपि, वर्तमान अवस्था भने स्कूल खोल्नका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । यदि,देशका हरेक व्यक्तिले उचित सावधानी अपनाएको भए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो, तर अचेल अधिकांश मानिसहरुले लापरवाही गरेको देखिरहेको छु । विदेशका थुप्रै देशहरुले पुन: लकडाउन गरेको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसैले मलाई लाग्छ, हामीले अझै केही महिना पर्खनैं पर्छ । हामी सधैं भन्छौं उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उचित हो भनेर । त्यसैले, मलाई लाग्छ अहिले हामीले स्कूलमात्र होइन हाम्रो वरपरका सम्पूर्ण कुराहरुलाई हामी सबैका लागि सुरक्षित बनाउनु पर्छ । केही महिनापछि, कोरोनाको खोप सर्वसुभल हुनसक्छ, नभए पनि समाजले नै विद्याथीहरुलाई स्कूल जान–आउने सुरक्षित बाटो तयार पार्न सक्छ । सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु बिना स्कूल खोल्नु भनेको विद्यार्थी र उनीहरुको सम्पर्कमा आउने हरेक व्यक्तिका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले म केही महिना पर्खनै पर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
उषा खड्गी, मिस नेपाल २०००
माघदेखि स्कूल खुल्ने कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएकी छु । हुन त मनमा एक प्रकारको डर कायमै छ । कोभिडबाट संक्रमितको संख्या नियन्त्रण भैसकेको छैन । मेरो कुरा गर्नु हुन्छ भने मेरो छोरी यसपटक एसईई दिने हो, उसको स्कूल माघबाट खुल्ने कुरा छ । बाबु चाहिँ अहिले कक्षा एकमा पढ्छ । उसको स्कूल चाहिँ अहिले खुल्दैन । त्यसैले अब राम्रै कुराको आशा गरौं, स्कूल खोल्दा राम्रै होला ।
सुदन डोटेल, शिक्षाविद्/गीतकार
विद्यालयहरु लगभग सबै खुलिसकेका छन् । हाम्रो जस्तो कमजोर तर महंगो ईन्टरनेट भएको देशमा अनलाइन कक्षाहरु सिमित ठाउँ अनि सिमित विद्यार्थीहरुबाहेक अरुले पढ्न पाएनन् । यसर्थ, विद्यालयहरु खोलेर हेल्थ–प्रोटेकललाई मेन्टेन गरी अब पढाउनुको विकल्प छैन । नत्र बच्चाहरुमा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावले देशलाई अझ पछि धकेल्छ । अर्कोकुरा, अब पुरै विश्व नै यो महामारीमा जुधेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा छ ।
रोशनी केसी, चलचित्रकर्मी
कोभिड–१९ को विषय परिस्थितिले विद्यालयहरु बन्द भएको भएको करिव दश महिना भैसकेको छ । यसबीचमा अनलाइन कक्षाहरु त सञ्चालन भैरहेकै छन्, तर भौतिक रुपमै विद्यार्थीहरु विद्यालयमा गएर अध्ययन जस्तो प्रभावकारी नहुने भएकाले मेरो विचारमा विद्यालय खुलाउन अनिवार्य छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, हरेक विद्यालयमा कोभिड–१९ बाट बच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको आवश्यक प्रोटोकोल सामाजिक दुरी, मास्क तथा सेनिटाइजरलाई अनिवार्य रुपले पालना गरेर विद्यालय खोल्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
विद्यालयहरु सधैं बन्द भैरहनु मात्रै पनि समाधान पक्कै होइन । सुरक्षित उपायहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्दै विद्यालय खोल्न सक्ने वातावरण बन्न सक्दछ ।
रमेश दहाल, गीतकार
हामीले देखेका, सुनेका हरेक वस्तु, पदार्थ, तथा पद्दतिहरु स्थिर नभएर चलायमान छन् । समय थपिँदै जाँदा हामीले पनि समय र परिस्थितिसंग चलायमान हुन जरुरी छ । हामी पृथ्वीका सम्पूर्ण प्राणीहरुले समयको बहावसँगै नयाँ परिस्थितिसँग जिउन सिक्दै जानुपर्छ र यो क्रम पृथ्वीमा जीवजन्तु उत्पति भएदेखि चल्दै आएको तथ्य हो भनेर विज्ञानले भन्छ । यसैले शैक्षिक संस्था जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र अब बन्द हुनु जायज हैन । लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको पढ्ने बानी बिग्रेको छ । मोबाइल तथा अन्य अनावश्यक बस्तुमा अनेक–अनेक किसिमका सामग्रीमा उनीहरु अल्झिन थालेका छन् । झट्ट रिसाउने, अल्छी गर्ने र कम सुत्ने बानीले बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव देखिँदै गएका छन् भने शैक्षिक प्रगति त निराशाजनक छ । यसैले आवश्यक सावधानी अपनाएर माघदेखि विद्यालय खुल्ने चर्चा स्वागत योग्य छ । अझ म त विद्यालय खुल्न ढिला गर्नु हुन्न भन्छु ।
यो कुरालाई मैले सकारात्मक हिसाबले लिएको छु । पहिलो त अहिले कोरोनाको खतरा कम हुँदै गएको छ । कोरोना लागेका विरामीहरु कोरोना भाइरसको कारणले भन्दा कोरोनाका कारण हुने व्याक्टेरियल इन्फेक्सनका कारण मरिरहेका छन् । यो कुरा भरखरै नेपाली स्वास्थ क्षेत्रले पनि अनुभव गर्यो र कोरोनाका विरामीहरुलाई एन्टिवायोटिक चलाउन थाल्यो र मृत्युदर पनि एभरेज २० बाट ७ तिर झर्यो । त्यस्तै कोरोनाले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएकोले कोरोना कहरकै बीचमा धेरै क्षेत्र सुचारु भए । अहिले कलेज पनि धेरै खुलिसके भने नेपाल सरकार र स्थानिय सरकारले पनि स्कुल खुलाउनु भनेकोले केही स्वास्थ मापदण्ड अपनाएर स्कुल खुलाउनुको विकल्पै छैन । तर साना बालवालिका छन् भने तिनिहरुलाई यो सेसन घरमै पढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
उज्वलकृष्ण श्रेष्ठ, समाजसेवी/राजनीतिककर्मी
यति धेरै महिना त स्कूल बन्द गरियो, अब भ्याक्सिन आएपछि मात्रै स्कूल खोले हुन्छ जस्तो लाग्यो ।
रविन महर्जन, गायक
माघदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय स्वागत योग्य छ, तर स्वास्थ्य–सुरक्षाको पूर्ण पालना भए–नभएको कडा अनुगमन गर्नुका साथै सुरक्षाको नाममा विद्यालयले अनावश्यक शुल्क लिएर अभिभावकलाई भार पार्ने काम गर्ने गर्नु हुँदैन ।
घनश्याम गौतम, हास्य अभिनेता
विद्यालय खुल्नु र सबै कुरा बिस्तारै खुल्दै चलायमान हुँदै जानु राम्रो कुरा हो, तर कोभिड–१९ को खतरा टरिसकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सावधानी नअपनाई विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीहरुमा कोरानाको महामारी बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सरकारले सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर, सुरक्षाका उपाय अपनाई, भौतिक दुरी कायम गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सके राम्रै हो । तर, विद्यालय खुलाउने वहानामा हचुवाको भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिँदा कोरोना झन् फैलन सक्छ । सबैले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
महादेव त्रिपाठी, हास्य अभिनेता/जादुगर
गाउँ–घरतिर कतिपय स्कूलहरु खुलिसकेको छन्, कति खुल्ने क्रममा छन् । मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, यति लामो समय त स्कूलहरु बन्द भए, अनलाईनबाट कक्षाहरु सञ्चालन भैरहे, अब तीन महिनाजति बन्दै गरेर वैशाखदेखि मात्र स्कूलहरु खुल्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ । बच्चाहरु अनलाइनबाट पनि पढेकै छन् । अहिले नै खुल्दा अझै डर छ । स्कूलले बच्चाहरुलाई कत्तिको प्रभावकारी रुपमा राखेर पढाउन सक्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यदि स्कूलले सबै कुराको ग्यारेन्टि लिन्छ भने खोल्दा पनि भयो ।
अजय अधिकारी सुशिल, संगीतकर्मी/शिक्षावीद्
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कोरोना भाइरसको महामारी फेरी फैलिएको सुन्दा निकै डर लागिरहेको छ ।
डम्बर बिकेल, गीतकार
माघ महिनाको प्रारम्भसंगै देशभरिका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने चर्चा चलिरहेको अवस्था छ, तर देशका विभिन्न ठाउँमा माघ महिना सुरु हुनुभन्दा निकै अगाडिदेखि नै विद्यालयहरू सञ्चालित छन् । यसरी अघिदेखि तथा माघ लागेपछि विद्यालय सुरु गरी एउटै कोठामा विद्यार्थीहरू राखी पढाउनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नु हो । किनकि कोरोना भाइरसले विश्वमा धेरै मानवीय क्षति गरेको कुरा सर्वविदितै छ । अझ अहिले कोरोनाको परिवर्तित रुप झन् बढी खतरा बनेर आइरहेको अवस्थामा विद्यालय खोलिहाल्नु उचित छैन । पहिले बाँच्नु पर्छ अनि मात्रै अरु । शिक्षा हासिल गर्नका लागि प्राय: सबै विद्यालयहरूले सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन कक्षा नै केही समयका लागि उपयुक्त छ । तसर्थ, सामुदायिक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुमा यो अनुरोध छ कि केही समय अनलाइन कक्षालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ । पहिले बाँचौं अनि पढौं र पढाऔं ।
By roshani|2021-01-09T08:30:35+05:45January 9th, 2021|News|0 Comments